Iindaba -Ukujonga phambili kwimveliso yamaphepha e-corrated e-2021
Njengoko sonke sisazi, ngo-2020, uqoqosho lwehlabathi ngequbuliso luhlangabezana nemiceli mngeni engalindelekanga. Le mingeni ichaphazele ingqesho kunye neemfuno zeemveliso, kwaye yazisa imiceli mngeni kumxokelelwane wonikezelo lwamashishini amaninzi.
Ukuze kulawulwe ngcono ukusasazeka kwalo bhubhane, iinkampani ezininzi ziye zavala, kwaye amazwe amaninzi, imimandla, okanye izixeko kwihlabathi liphela zivaliwe. Ubhubhane we-COVID-19 ngaxeshanye ubangele ukuphazamiseka kunikezelo nakwimfuno kwilizwe lethu elihlangeneyo kwihlabathi liphela. Ukongeza, inkanyamba eyimbali kuLwandlekazi lweAtlantic ibangele ukuphazamiseka kweshishini kunye nobunzima bokuphila eMelika, kuMbindi Merika, nakwiCaribbean.
Kweli xesha liphelileyo, sibonile ukuba abathengi kwihlabathi liphela baya bezimisele ukutshintsha indlela abathenga ngayo izinto, oko kukhokelele ekukhuleni okunamandla kuthumelo lwe-e-commerce kunye namanye amashishini enkonzo yendlu ngendlu. Umzi mveliso wempahla yabathengi uhlengahlengisa olu tshintsho, oluzise imiceli mngeni kunye namathuba kushishino lwethu (umzekelo, ukonyuka okuqhubekayo kokupakishwa kwamazinki okusetyenziselwa ezothutho lwe-e-commerce). Njengoko siqhubeka nokwenza ixabiso kubathengi ngokusebenzisa iimveliso zokupakisha ezizinzileyo, kufuneka silwamkele olu tshintsho kwaye senze uhlengahlengiso kwangexesha ukufezekisa iimfuno eziguqukayo.
Sinezizathu zokuba nethemba malunga ne-2021, kuba amanqanaba okubuyisela kwimeko yezoqoqosho aphambili akumanqanaba ahlukeneyo, kwaye kulindeleke ukuba izitofu ezisebenzayo ziya kuba kwintengiso kwezi nyanga zimbalwa zizayo, ukuze kulawulwe ngcono ubhubhane.
Ukusuka kwikota yokuqala ukuya kwikota yesithathu yowama-2020, imveliso yebhodi yeekhonteyina eqhubeka nokukhula, inyuke nge-4.5% kwikota yokuqala, inyuke nge-1.3% kwikota yesibini, kwaye inyuke nge-2.3% kwikota yesithathu . La manani aqinisekisa imeko elungileyo eboniswe kuninzi lwamazwe nakwimimandla kwisiqingatha sokuqala sika-2020. Ukonyuka kwekota yesithathu ikakhulu kubangelwe kukuveliswa kwephepha elerisayikilishwe, ngelixa ukuveliswa kwefibre yeentombi kuphulukene namandla kwiinyanga zasehlotyeni, kunye ukuhla ngokubanzi kwe-1.2%.
Kuyo yonke le mingeni, silibonile lonke ishishini lisebenza nzima kwaye libonelela ngeemveliso zekhadibhodi ukugcina imixokelelwano ebalulekileyo yokuvulela ukuhambisa ukutya, amayeza kunye nezinye izinto ezibalulekileyo.
Iinqwelo zokuhambisa iiRoller, Indawo yokuSebenza yeWorkshop, Ifolda yephepha le-A3, Umatshini oSebenzayo wePakethe yePhepha, Inqwelo yokuhambisa, Ibhanki ye-Erp,